Semalt: A Botnet yeKupambwa kweIoT Devices Anonunura DdoS Dhiyo Dhiyabhorosi Kurwisa
Zvose zvinorwisana nehutano zvinoenderana nekuchengetedzwa kwakakwana. Iwe unofanirwa kuita kuti webhusaiti yako ive yakachengeteka kubva kune dzimwe dzezvinowanzoitwa DDoS kutambudzwa. Mune chimwe nechimwe chezviitiko izvi, mabhota anounza sevha pasi, zvichiita kuti nzvimbo isakundikana kutumira basa rayo rokutanga. A network of botnets inogona kukonzera DDoS huru kurwisa uye inopa makambani akawanda asingakundi mune mhinduro dzavo dzevava. Iko huru yebhodaneti yakakonzera mafaira akawanda ane nzvimbo inowanzotungamirira yekuita mabasa avo akawanda - e vape starter kits. Muzviitiko zvakawanda, vanhu vanotarisana nemhosva dzakadai sekutsinhanisa kwekambani nekuda kwesangano rakakanganisa mawebsite akawanda. Semuenzaniso, kurwisa kweAkamai kunoitika kana kune bhodhi yebhodaneti inotarisa chinowanzozivikanwa.
IoT DDoS kurwisa inofungidzirwa kuti yakakura kudarika iyo yeEllis. Kungofanana negore ra2010, vazhinji DDoS kutambudzwa kwaiva pawebsite seJoomla, izvo zvakakonzera kupera simba kwebasa rose rebhizimisi rekutengesa. Kubva pakurwiswa uku, vanhu vaine zvidzidzo zvinokosha uye vakawana kuti nei vachifanira kudzivirira mashumiri avo. Nik Chaykovskiy, an Semalt nyanzvi, anoti kunewo dzimwe nzira dzinogona kuita kuti kubudirira kwekuita izvi zviitike. Munzvimbo dzakawanda dzekutengeserana kwekutengeserana, kuchengeteka kwewebsite kunotarisana nezvimwe zviyero zvavanenge vaisa kuti varambe vaine spammers. Mune zvimwe zviitiko, vatengesi vanokwanisa kukunda zviyero izvi vachishanda nyore kuramba kwehutambudziro.
Tsvaga Engine Optimization neBots
SEO inosanganisira kushandisa bots main. Nhamba dzewebsite dzakawanda dzinoenderana nekutengesa bots kuti huvandudze ruzivo rwavo rwewebsite. Zvisinei, vashandisi vanogona kuita zvinotyisa bots nechinangwa chisina kunaka..Zvizhinji zveDDoS zvinotyisa zvinotanga kushandiswa kushandisa dzimwe dze bots. Iwe webusaiti yako inogona kukwanisa kusiyanisa pakati pekurwisana uku. Unogonawo kuchengetedza nzvimbo yakasimba paSERPs kunyanya kana nzvimbo yacho yakachengeteka. Nzvimbo dzekuchengeteka dzewebsite kana dzisina hurongwa hwakanaka hweSeO dzinotambura nemibvunzo ine chokuita nekunyoresa. Uyezve, webhusaiti inogona kukanganisa pane SEO chikamu kana pane vashomanana kana pasina anti-spam kurwisa zviyero.
Paunenge uchiita zvekutengeserana, pane chikonzero chekuongorora kufambira mberi kwemashoko ako ekudhinda. Vashandi vepaWebhu vanovimba netsika dzakadai seGoogle Analytics dzinogona kudzivirira vamwe spam. MuGoogle Analytics, unogona kudzivirira Botnet traffic uye zvimwe zvezvimwe zvinotyisa zvekurwisa. Zvinogona zvakare kushandisa zviyero izvo zvinogona kuita webhusaiti kubvisa mukati megwagwa. Iwe unogona kushandisa Google Analytics kuita kuti webhusaiti yako yehutano ive yakakwana. Muchiyero chakafanana, kune dzimwe nzira dzinoshandiswa nevatengi kuti vashandise mabhota.
Zvizhinji zvemabhizinesi zvinoda webhusaiti yakabudirira yekuita mabasa avo ezuva nezuva. Muzviitiko zvizhinji, mawebsite anoshandisa maitiro akaita semhinduro yevavha uye mabhota kuitira kuti zviitiko zvavo zvibudirire. Mune chiitiko chekubiridzira kweterevhizheni, munhu anoshandisa zvigaro anotanga kutengesa botnet kune webhusaiti. Muchiitiko ichi, nzvimbo yose inogona kuputsika pasi nekuwa, zvichiita kuti kuparara munzira iyo webhusaiti inoshanda. Mumangwana akapfuura, kushungurudzika kwebhodaneti seAkamai kunogona kukonzera kuwanda kwemigumisiro yakaipa pamusoro pekushanda kwewebsite yako. Iwe unogona kuchengetedza nzvimbo yako pakurwisana nekurwisana uku kune zvimwe zvakawanda zvinorwisana. Iwe unogonawo kugadzirisa ku webhupu yekutengesa mishandirapamwe panzvimbo yako.